warkii.com » 25-shaqsi Bollywoodka katirsan hadii daroogo loo xiro maxaa u dambeyn kara fanka hindiya!!
25-shaqsi Bollywoodka katirsan hadii daroogo loo xiro maxaa u dambeyn kara fanka hindiya!!
Kiiska Sushant Singh Rajput waxuu si weyn u naafeeyay waayaha fanka hindiya geerida jilaagan kadibna wax badan ayaa isbedeleen sido kalena hadii wax walbo intaan ku ekaan lahaayeen waaba wax iska caadi ah balse waxa soo socda ayaa ka daran.
Rhea Chakraborty markii la xiray misane la diiday wax damaanad ah in lagu soo daayo waxay bilaawday shaqsiyaad caan ah inee magacaawdo oo ay ku eedeyso inee iyagana daroogo isticmaalaan sideeda oo kale kadib markee iyada qiratay.
Dadkii Rhea ay sheegtay waxaa kamid ah Sara Ali Khan iyo Rakul Preet Singh oo atiriishooyin caan ah waqtigaan sido kale 8-xidig waaweyn ayaa la sheegay inee liiska kujiraan balse sida guud 25-shaqsi Bollywood qeyb ka ah ayee Rhea magacaawday sida saxaafada laga soo xigtay.
25-shaqsi waxay isugu jiraan atoorayaal, atiriishooyin, qarash gareyaal iyo agaasimayaal, suaasha waxay tahay hadii lacala 25-shaqsi ku cadaato daroogada iyo maandooriyaha inee ka ganacsadaan ama isticmaalaan misane sidaas lagu xiro maxaa u dambeyn kara fanka hindiya
Waqtigaan la joogo fanka hindiya si weyn ayaa looga niyad jabaya ayagoo markii hore lagu dhaliilayey filim xumi sanadihii dambe oo sidii hore aysan ahen ayee hadana ku darsadeen ceeb iyo fadeexo joogto ah iyo waxyaabo kala gedisan oo lagu heesto.
Aan aragno waayaha fanka hindiya halka uu ku dambeyn doono iyo arinkaan taagan halka uu kudhamaan doono balse waxaa xaqiiq ah kiiska Sushant inuu wax badan bedelay dadkana wax badan ku kala ogaadeen.